> Resource > iPad > Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka Android inay iPad
Waxaan leeyahay taleefankiisa Samsung Galaxy Sii oo aan fahmi karaa sida loo sawiro ka telefoonka u hesho in ay iPad. Waxaan isku dayay iyaga iyo furitaanka email iyo in aan shaqeyn.
Waxay u badan tahay in badan oo dadka isticmaala Android sidoo kale iPads, sida iPad mini. Sida mid ka mid ah oo aad rabto in aad sawiro ka Android wareejiyo iPad, si aad u mahad kartaa sawiro shaashad weyn leh xallinta sare. Marka ay timaado in kala iibsiga sawirka, Lugood u muuqataa in ay u kaalmeeyana wanaagsan, sababtoo ah Lugood kombiyuutar si ay u Library Photo ku iPad u hagaagsan kartaa sawiro. Sidaas darteed, kaliya aad u baahan tahay si ay u dhoofiyaan folder sawir ka Android phone ama kiniin ah in computer ka, ka dibna u wareejiyo si aad iPad via u hagaagsan Lugood. Waxay arrintu u muuqataa fudud. Si kastaba ha ahaatee, waa in aad iska cad in mar walba oo aad u hagaagsan photos in iPad, oo dhan photos ee Library Photo laga saari doono. Sidaas darteed, waxa ay noqon doontaa musiibo ka photos ee Photo Library markii yihiin asalka ah.
Dhab ahaantii, in ay sawiro ka phone Android wareejiyo iPad, waxaad dooran kartaa kale. Waad ku kalsoonaan kartaa qalab dhinac saddexaad si ay u xaliyaan dhibaatada kala iibsiga sawirka. Halkan, waxaan jeclaan lahaa in aad ku talin ah Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Waxaa loo sidii xirfad software kala iibsiga telefoonka, waxa ay taasi si sahlan in aad si iPad wareejin karaan oo dhan photos Android in mid ka mid click. Software Tani ma tirtiri doonaa wax kasta oo sawir ku saabsan iPad inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga sawirka ilaa aad ka dhigan tahay in. Mobiletrans Wondershare taageeraan arrimo cusub 9, iyo qalabka cusub ee iPhone 6S Plus, 6S, 6 Plus, 6, iyo in ka badan.
Download version saxda ah ee software-ka hoos ku qoran. In qayb hoose, waxaana idin tusin tallaabooyinka fudud la version Windows ah.
Fiiro gaar ah: Wondershare MobileTrans ayaa si buuxda u la jaan qaada phone badan Android iyo murriyado, iyo iPads. More info >> .
Tallaabada 1. Daahfurka software ku computer Windows ah
Ka dib markii ay ku rakibidda, waa in aad abuurtaan software-ka kombiyuutarka. Dooro Phone in hab Transfer Phone oo guji Start .
Fiiro gaar ah: Wondershare MobileTrans ayaa nuqul ka kartaa sawiro ka Android inay iPad kaliya marka Lugood la geliyo.
Tallaabada 2. Isku telefoonka Android / kiniin iyo iPad in kombiyuutarka
Connect labada qalabka kombuyuutarka via fiilooyinka USB. Ka dib markii aan ogaanno, software ku arki doono labada qalabka on furmo suuqa hoose. Sida caadiga ah, telefoonka Android ama kiniin lagu muujiyay dhinaca bidix, oo waxaa loo arkaa qalab isha. Sida qalab Ahaado, iPad lagu soo bandhigi doonaa oo Midigta.
Intaa waxaa dheer, software waxa uu leeyahay shaqo ee ay ka saareen sawiro iPad, laakiin waxa ay gebi ahaanba ku xiran tahay doorashada. Taasi micnaheedu waa in, haddii aad rabto in aad u faaruqiso maktabadda Photo on iPad ah, waa in aad sax xogta oo cad ka hor inta nuqul .
Tallaabada 3. Transfer sawiro ka Android inay iPad
Tan iyo software tani waxay suurtogal aad si ay u gudbiyaan jadwalka, iMessages, videos, sawiro, muusig iyo xiriirada aad iPad waqti isku mid ah. Sidaa awgeed, waa in aad uncheck videos, xiriirada iyo music. Markaas, bilowdo kala iibsiga sawirka adigoo gujinaya Start Copy . Marka wada hadal ka soo booda, oo aad u arki karaan boqolkiiba iibsiga sawir. Marka iibsiga sawir uu dhamaado, waa in aad riix OK la dhammeeyo.